Toliara : Noravain’ny mpitandro filaminana ireo andian’olona mpanakorontana -
AccueilSongandinaToliara : Noravain’ny mpitandro filaminana ireo andian’olona mpanakorontana
10/03/2018 admintriatra Songandina 0
Nisehoana savorovoro nataona andian’olona marobe nidina an-dalambe nirongo lefona, famaky, antsy lava lela, vato ary hazo tany Toliara omaly maraina. Vokatr’izay hetsika fanakorontanana izay, dia voatohintohina avokoa ny filaminam-bahoaka sy ny andavanandron’ny olona rehetra tany an-toerana. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia tohin’ilay raharaha nahafatesana tovovavy 15 taona izay noloarana maso tao Maninday ny 26 febroary lasa teo no anton’izany korontana nahasimbana zavatra maro sy naharatrana olona miisa 05 izany. “Nivory ireo Dina, ary nanao kabary fa mandoa omby miisa 33 ny fianakaviana, na ilay olona nahavanon-doza handevenana ny maty sy tsy hisian’ny lonilony. Rehefa nitady ilay olona amin’izay izy ireo fa tsy nahita, dia ny tompon-trano , izay tsy havana, no tsinontsinon’io lehilahy mpianatry ny oniversite ao Maninday ahiahiana io fa nanome trano hofaina azy no tadiavin’ireo Dina handoa ireo omby ireo. Tsy nanaiky izany io olona io, ka mitady hampiasa hery aminy ireo Dina ka niditra an-tsehatra nanakana izany ireo mpitandro filaminana”, hoy ny fanazavana nentin’ny avy eo anivon’ity vondron-kery ity. Noho ny hatezerana sy ny tsy fahafaliam-pon’ireo mpanakorontana sy mpitarika posy, izay voalaza fa mitovy foko niaviana amin’io zazavavy niharan-doza io, dia nanao barazy eraka ny tanànan’i Toliara ireto farany, ka voatohintohina avokoa ireo mpifamezivezy rehetra , na ny niditra na ny nivoaka tao amin’ity distrika ity.
Olona 60 mahery voasambotra
Noho ny sakoroka sy ny fanimban-javatra ary ny fikasihan-tanana mafy naterak’ireo mpanakorontana ireo, dia niroso tamin’ny fisamborana avy hatrany ireo mpitandro filaminana , ka olona miisa 60 mahery no indray voapaingotra. Mba ahafahana nanaparitaka ireo andian’olona nandrava ny filaminana tao amin’ny tanànan’i Toliara ireo ihany koa, dia nandray fepetra tamin’ny alalan’ny fanapoahana basy sy lakrimozena ireo manam-pahefana. Vokatr’io savorovoro io moa, dia olona tsy manan-tsiny miisa dimy, izay nifanehitra tamin’izy ireo no naratra mafy sy voatery nalefa any amin’ny toeram-pitsaboana. Nikatona avokoa, ihany koa ireo sekoly sy sampan-draharaha hafa tao Toliara io omaly io. Nisy tamin’ireo mpianatra aza no nidiran’ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-tsekoly, ka voatery nitsoaka noho ny tahotra. Nisafidy nanidy tsena ihany koa ireo mpivarotra noho ny tahotra an’ireo mpanararaotra sy mpandroba, izay tsy maintsy manao ny fanaony foana amin’ny tranga tahaka izao. Niaraka nanambatra hery tamin’ny fandraisana andraikitra tao anatin’ity raharaha ity avokoa, na ny zandary, na ny polisy ao Toliara. Ny tanjona dia ny namerenana faran’izay haingana ny filaminana any an-toerana. Notazomina nanaovana fanadihadiana kosa ireo mpanao fihetsiketsehana izay nandravarava tanteraka ireo. Mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ilay lehilahy avy any Toamasina, ary mpianatry ny oniversite ao Maninday, izay voalaza fa sakaizan’io zazavavy io, ary ahiana ho nahavita iny habibiana tsy roa aman-tany iny.